Canberra, isi obodo Australia | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Canberra, Nduzi
Canberra O doro anya na ọ bụghị obodo kachasị ewu ewu na Australia ma ọ bụ asọmpi dị n'etiti Sydney na Melbourne, mana ọ bụ isi obodo ma ị nwere ike inwe mmasị n'ịchọpụta ya.
Ọ bụ obodo mara mma ma na-adọrọ mmasị nke toro na ndò nke ụmụnne ya ndị okenye, na-echere igosi ihe ọ nwere maka ndị ọbịa: ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, ebe nkiri, n'okporo ámá ịzụ ahịa, okirikiri gastronomic, akụkọ ihe mere eme na ọnụ ọgụgụ ndị nwere obi ụtọ, ndidi na enyi. Ọfọn agbụrụ.
1 Canberra, isi obodo
2 Ihe ị ga-ahụ na Canberra
3 Iri na ị drinkingụ mmanya na Canberra
Canberra, isi obodo
Obodo a di n’otu ebe amara dika Australian Capital Territory ma ọ bụ ACT, n’ime mgbago mgbago ugwu na 280 kilomita site na Sydney na 660 si Melbourne.
Ichere na ọ gaferela ụmụnne ya ndị nwanyị? Ọ dịghị ee, yabụ ị nwere ike ịbịa leta ya. Ọ rụọla ọrụ dị ka isi obodo kemgbe mmalite nke narị afọ XNUMX, ebe ọ bụ na 1908 kpọmkwem, ọ bụkwa otu n'ime obodo ole na ole na mba ahụ nke emere atụmatụ tupu oge eruo.
Dị ka isi obodo ndị ọzọ nke mba ndị ọhụrụ, nhazi obodo ya pụtara na akwụkwọ wee pụta na ala. Wayzọ ya Emere na asọmpi mba ụwa na ndị mmeri bụ di na nwunye nke ndị na-ese akwụkwọ America.
Ọ bụrụ na mmadụ na-elele maapụ Canberra na-achọpụta ihe aghụghọ na ọdịdị geometric dị ka okirikiri, triangles na ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ. Ihe niile na - eso usoro na enwere otutu oghere ndu, dị ka obodo dị mma na nke oge a na-eche n'oge ahụ.
Ihe si na ya pụta bụ idiocha, idiocha na nnọọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ obodo.
Ihe ị ga-ahụ na Canberra
Bụ isi obodo ụtụtụ kacha ụlọ ọrụ gọọmentị: Nzuko omeiwu, thelọikpe Kasị Elu ma ọ bụ National Archives, dịka ọmụmaatụ.
Okwu mmechi Ọ bụ na Capitol Hill na ị nwere ike ịga na ya na njem nke na-enye gị ohere ịhụ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme, ọtụtụ nka Australia na otu n'ime akwụkwọ ndị kasị ukwuu n'ụwa. Ga-enwetekwa ọmarịcha obodo ahụ ma hụ ebe dị elu nke mita 81 dị nso. Ọ na-emepe ụbọchị ọ bụla site na elekere itoolu nke ụtụtụ ruo elekere ise nke mgbede.
La Ụlọikpe Kasị Elu Ọ dị n'akụkụ Ọdọ Mmiri Burley, na mpaghara ndị omeiwu. Nwere ike ịga leta ime ụlọ ya atọ wee hụ ọrụ nka dị iche iche na-egosi mgbanwe nke mba ahụ. Ọ na-emepe n’izu site na 9:45 nke ụtụtụ ruo 4:30 nke ụtụtụ na Sọnde site na etiti ehihie ruo 4 pm.
Dị nso ị nwekwara ike ịga na Ọ́bá Akwụkwọ Mba Australia. Enwere ihe ngosi ma nwee ike isonye na njem ahụ ma ọ bụ drinkụọ kọfị na-elele ọdọ mmiri. Ntinye bụ n'efu. Na Ọdọ mmiri Burley Griffin Ọ bụ ọdọ mmiri ebe ndị mmadụ na-eji ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri ma ọ bụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ọbụna gaa ịkụ azụ.
Gburugburu ya enwere kilomita 40 nke ụsọ oké osimiri ma chọọ ya mma n'ọtụtụ ogige na ubi ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ n'èzí ma ọ bụ naanị na cafe ma ọ bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ.
Ọstrelia esonyela England n'ọtụtụ njem agha, yabụ otu n'ime saịtị kachasị mkpa n'obodo ahụ bụ Ememe Ncheta Australia, nnukwu ụlọ ihe ngosi nka nwere ebe nsọ gụnyere nke na-emepe ụbọchị ọ bụla site na 10 ruo elekere 5 wee nwee nnabata n'efu.
Ọ na-amasị m ịhụ ebe dị iche iche ka m wee gbanahụ ndị ochie: ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na veranda nka. Achọrọ m ahụmahụ. Ọ bụ ya mere m ji kwado ka ị gaa ebe ndị a:
Mgbanwe Nkwukọrịta miri emi nke Canberra: Ọ bụ ụgbọala dị nkeji iri anọ na ise site na Canberra ma bụrụkwa akụkụ nke netwọ mpi mpi oghere mba ụwa nke NASA. Ọ gụnyere ihe ngosi na mmekọrịta dị n'etiti oghere na Australia na nnabata bụ n'efu. Ọ na-emeghe kwa ụbọchị site na elekere 45 nke ụtụtụ ruo elekere ise nke ụtụtụ ma nwee ebe a na-ere nri.
Towerlọ Telstra: ụdị echiche nke na-enye echiche 360 ​​Celsius nke mpaghara ahụ dum ma dị elu 195 mita. Enwere nyiwe n'èzí na ebe a na-ekpuchi ma na-emechi emechi maka oge oyi. Ọ gụnyere cafe, ụlọ ihe ngosi nka na ụlọ ahịa onyinye. Ọ na-emepe ụbọchị ọ bụla site na elekere itoolu ụtụtụ ruo elekere iri nke mgbede Ọ na-efu dollar Australia 9.
Mint nke Royal Australia: ọ bụ ụlọ na-eme ego mkpụrụ ego na nleta na-adọrọ mmasị ị ga-amụta etu esi eme ha, jiri igwe na ígwè ọrụ. Nwere ike mint gị dollar gị. Admission bụ n'efu ma na weekdays ọ na-emepe site na 8: 30 ruo 5 na mgbede.
Carillon mba: Ọ bụ nnukwu egwu egwu nwere mgbịrịgba ọla kọpa iri ise na ise nke dị kilogram isii ruo tọn isii. Ọ dị mita 55 n'ogo ma bụrụ onyinye sitere na Great Britain na Australia mgbe Canberra mere afọ 50 mbụ ya. Ọ na-akwado nkwupụta okwu na Wednesde na Sọnde site na 50:12 ruo 30:1 pm na Aspen Island bụ ebe kachasị mma iji nwee ekele maka ya ma nwee ọkoụ.
Captain James Cook Ncheta: Thegbọ mmiri mmiri na-amasị gị na Geneva? Ọ dị ebe a ọzọ. Ọ bụ ezie na ọ naghị arụ ọrụ ugbu a maka mmezi, ọ dị na Lake Burley Griffin ma bụrụ akụkụ nke ncheta a raara nye onye nyocha nke oké osimiri Australia. Ewubere ya na bicentennial anniversary nke ụbọchị Cook rutere na mba ahụ na 1770.
Iri na ị drinkingụ mmanya na Canberra
Obodo nwere ezigbo nri nri ọtụtụ ụlọ oriri na ọesụ andụ na ụlọ ahịa. Ka anyị cheta na Australia bụ obodo nwere ọtụtụ ọdịnala nke na-anọchi anya gastronomies ụwa niile. Ka anyị ghara ichefu na a na-emepụta mmanya ebe a enwere mmanya na mmanya nụrụ ụtọ.
Abụọ mmanya nhọrọ: na Ubi Ubi Ifufe Anọ, na Murrumbateman, naanị nkeji 30 si Canberra, na ọnọdụ mara mma. Ha na-eme kafe na ebe oriri na ọ restaurantụ andụ na ị nwere ike ịgagharị na ngwụsị izu na ezumike site na 10am ruo 5pm na ị wineụ mmanya site na 12pm ruo 3pm na efere gburugburu AU $ 20.
Nhọrọ ọzọ bụ Onye Ubi Ala Ugwu Vine Survevyor nke na-eme Pinor Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz na ọtụtụ ndị ọzọ. Ha di ihe dika mita 550 n’elu elu oke osimiri ebe enwerebu ugwu mgbawa. Ọ na-emeghe kwa ngwụsị izu na ezumike site na 10 ruo 5 elekere. Na bistro dị mma ebe ị nwere ike iri nri ehihie.
Lọ ahịa kọfị? Ndị Australia bụ ndị na-anụ kọfị Taa, dị ka ọ dị n'ụwa niile, kọfị kọfị na kọfị dị jụụ bụ usoro nke ụbọchị. Ga-ahụ ha ebe niile mana dee aha a: Nalọ Ona Coffe. N'isi ya bụ onye mmeri 2016 Australian Barista, Hugh Kelly na onye mmeri 2015, Sasa Sestic. Chọta ya na 68 Wollongong Street, Fyshwick.
Eziokwu bụ na ọ gaghị ekwe omume inyocha ihe niile, mana ihe dị mma banyere isi obodo Australia bụ na site na weebụsaịtị ya ị nwere ike jikọọ na Googel Play ma ọ bụ App Store wee budata ihe bara uru ngwa maka nlegharị anya na Canberra.
Ọ bụ ihe Otu Ezi Ihe mgbe ọzọ na ọ bụ ibu zuru ngwa na ọtụtụ vidiyo edere n'ime 20 nkeji ọ bụla, ma ọ bụ obere obere. Ha niile na-eje ozi ịhazi ụzọ kachasị mma n'obodo, ihe ị na-agaghị echefu ma ọ bụrụ na ị gara Australia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Canberra » Canberra, isi obodo Australia
Àkwà mmiri 5 pụrụ iche ebe ị ga-achọ iji onwe gị